साउदीबाट २६ र २७ जुनमा तेस्रो र चौथो उडानबाट स्वदेश फर्कने नेपालीहरुका लागि अत्यन्त जरुरी सूचना
हिमालय एयरलाइन्सको साउदी अरबको दमामबाट यही मिति २६ र २७ जुन २०२० मा दमामबाट काठमाडौँ उडान हुने भएको छ ।
उक्त उडानबाट स्वदेश फर्कने नेपालीहरुको सूचि नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको प्रथमिकताका आधारमा राजदूतावासद्वारा तयार गरी हिमालय एयरलाईन्सको दम्मामस्थित कार्यलयमा पठाइएको छ ।
उक्त सूचि यसै सूचनामा समेत संलग्न छ ।
सम्पुर्ण यात्रुहरुले कोभिड-१९ नेगेटिभको प्रमाणपत्र साथैमा राख्नुपर्ने छ ।
हवाई टिकटको लागि हिमालय एयरलाईन्सको दम्मामस्थित प्रतिनिधि श्री सुवास तिमिल्सिना, टेलिफोन नं +00966 598400198 ईमेल ठेगाना: [email protected] मा सम्पर्क गरी टिकट बुकिङ गरेपछि मात्र कोभिड-१९ टेष्ट गर्नुहोला ।
अन्य विषयमा कुनै सहयोग आवश्यक भएमा यस राजदूतावासका जनसम्पर्क अधिकारी श्री हरि घिमिरे (Mob. No. 0500081536) लाई सम्पर्क गर्नुहुन समेत अनुरोध छ।
• यस अघि मिति २०७७ असार १ र ३ गते हिमालय एयरलाईन्सलाई पठाइएको पहिलो र दोस्रो सूचिमा बाँकी रहेकाहरुले समेत टिकटका लागि एयरलाईन्सको माथिको ठेगानामा सम्पर्क गर्नुहोला ।
• भिजिट भिषा र Re-Entry भिषाको अवधि सकिएकाले भिषा नवीकरण गर्नुहोला ।